Izitayela ezi-5 eziPhezulu ku-Digital Asset Management (DAM) Ezenzeka Ngo-2021 | Martech Zone
Amathrendi aphezulu ama-5 ku-Digital Asset Management (DAM) Ayenzeka Ngo-2021
NgoLwesithathu, Februwari 10, 2021 NgoLwesithathu, Februwari 10, 2021 U-Amalie Widerberg
Ukuqhubekela ku-2021, kunentuthuko ethile eyenzekayo kufayela le- Ukuphathwa kwefa ye-Digital (DAM) imboni.
Ngo-2020 sabona izinguquko ezinkulu emisebenzini nasekuziphatheni kwabathengi ngenxa ye-covid-19. Ngokusho kukaDeloitte, inani labantu abasebenza besuka emakhaya liphindwe kabili eSwitzerland phakathi nalolu bhubhane. Kunesizathu futhi sokukholelwa ukuthi le nkinga izodala i- ukwanda unomphela komsebenzi okude ezikalini zomhlaba. UMcKinsey ubuye abike nabathengi befuna ukwenyuka kwezinsizakalo zedijithali noma izinqubo zokuthenga, ngezinga elikhulu kakhulu ngo-2020 kunakuqala, kuthinta izinkampani zombili ze-B2B ne-B2C.
Ngalezi zizathu nokuningi, siqala unyaka we-2021 ngokuhluke ngokuphelele kunalokho ebesikulindele ngonyaka owedlule. Noma ukwenziwa kwedijithali bekuyinto eqhubekayo iminyaka eminingana manje, kunezizathu zokulindela ukuthi isidingo sayo sizonyuka kuphela ngonyaka olandelayo. Futhi nabantu abaningi abasebenza kude - futhi imikhiqizo nezinsizakalo zithengwa futhi zenziwa online ngezinga elikhulayo - silindele ukubona ukukhula okubonakalayo enanini lezimpahla zedijithali kanye nesidingo sokusekela isoftware. Ngakho-ke, akungabazeki ukuthi Isoftware Yokuphathwa Kwempahla Yedijithali kuzoba yindawo yokusebenza ebalulekile yamabhizinisi nezinhlangano eziningi ngonyaka ozayo.
Kule ndatshana, sizobhekisisa ukuthi i-2021 ibekele ini amapulatifomu we-Digital Asset Management futhi sizoklelisa izitayela ezi-5 eziphezulu esikholelwa ukuthi zizovelela kakhulu kulo nyaka.
Ithrendi 1: Ukulawulwa Kwempahla Nedijithali
Uma u-2020 esifundise into eyodwa, bekungukubaluleka kwemikhuba yokusebenza enamandla. Ukukwazi ukusebenza kude futhi ngokusebenzisa amadivayisi ahlukahlukene, akusekho ekubeni lusizo kwaba yisidingo esiphelele samabhizinisi nezinhlangano eziningi.
Ngenkathi amapulatifomu e-DAM ebesiza abantu nezinhlangano ukuthi basebenze ukude isikhathi eside, kunengqondo ukukholelwa ukuthi abahlinzeki be-software bazokwenza umsebenzi onamandla ube sezingeni elikhudlwana. Lokhu kufaka phakathi ukwenza ngcono ukusebenza okuningana kwe-DAM, njengokusebenzisa amadivayisi eselula ngezinhlelo zokusebenza noma ukwenza lula ukugcinwa kwamafu ngesivumelwano seSoftware njengesevisi (SaaS).
KwaFotoWare, sesivele siqalile ukulungiselela abathengi abafuna ukuhamba kakhulu. Ngaphezu kokukhulisa ukugxila kwethu ku-SaaS, siphinde sethula uhlelo lokusebenza olusha lweselula emuva ngo-Agasti ka-2020, senza amaqembu akwazi ukufinyelela futhi asebenzise i-DAM yawo ekuhambeni ngamadivayisi wabo weselula.
Ithrendi 2: Ukuphathwa Kwamalungelo namaFomu Okuvuma
Kusukela lapho imithethonqubo ye-EU GDPR iqala ukusebenza ku-2018, kube nesidingo esandayo samabhizinisi nezinhlangano ukugcina ithrekhi yokuqukethwe nokuvunywa kwabo. Noma kunjalo, umuntu angathola izinhlangano eziningana zilwela ukuthola izindlela zokuhambisana nale mithetho kahle.
Ngonyaka odlule sisize abasebenzisi abaningi be-DAM ukumisa ukuhamba komsebenzi ukuxazulula izingqinamba efanele ku-GDPR, futhi lokhu kufanele kube ukugxila okugqamile nango-2021. Njengoba izinhlangano eziningi zibeka phambili ukuphathwa kwamalungelo ne-GDPR, sikholelwa ukuthi amafomu wemvume anendawo ephezulu ohlwini lwezifiso zababambiqhaza abaningi.
Abasebenzisi be-DAM abangama-30% babheke ukuphathwa kwamalungelo ezithombe njengenye yezinzuzo ezinkulu.
Ngokusetshenziswa kwamafomu wemvume yedijithali, lokhu kufanele kube ukusebenza kwamandla amakhulu, hhayi nje ngokuphathwa kwe-GDPR, kepha ngezinhlobo eziningana zamalungelo ezithombe.
Ithrendi 3: Ukuhlanganiswa Kokulawulwa Kwempahla Yedijithali
Umsebenzi oyinhloko we-DAM ukonga isikhathi nomzamo. Ukuhlanganiswa ngakho-ke kubalulekile empumelelweni ye-DAM, ngoba inika amandla abasebenzi ukuthi bakwazi ukubuyisa izimpahla ngqo endaweni yesikhulumi lapho besebenza kwezinye izinhlelo, iningi lazo elizenza kakhulu.
Imikhiqizo esebenza kahle isuka kude nezixazululo ze-single-vendor suite, ibeka phambili abahlinzeki be-software abazimele kunalokho.
Akungabazeki ukuthi kunezinzuzo eziningi zokukhetha nokukhetha isoftware esikhundleni sokuboshwa kubathengisi oyedwa noma ababili. Kodwa-ke, ukuhlanganiswa okulungile kufanele kube khona ukuze izinkampani zithole okuningi kusoftware yazo ezimele. Ama-API nama-plugins ngakho-ke kungukutshalwa kwemali okubalulekile kunoma yimuphi umhlinzeki wesoftware ofuna ukuhlala efanele futhi uzoqhubeka nokubaluleka ngo-2021.
Ku-FotoWare, siqaphela eyethu ama-plugins we-Adobe Creative Cloud ne-Microsoft Office ukuthandwa kakhulu phakathi kwabakhangisi, kanye nokuhlanganiswa kohlelo lwe-PIM noma i-CMS yenhlangano. Lokhu kungenxa yokuthi abathengisi abaningi kuzofanela basebenzise izimpahla ezahlukahlukene ngobuningi bezinhlelo ezahlukahlukene nesoftware. Ngokuba nokuhlanganiswa endaweni, singasusa isidingo sokulanda nokulayisha njalo amafayela.
Ithrendi 4: Ubuhlakani bokufakelwa (AI) kanye nokuphathwa kwempahla yeDijithali
Omunye wemisebenzi edla isikhathi esiningi lapho usebenza ne-DAM uhlobene nokungeza imethadatha. Ngokusebenzisa ama-AI - nokubanika amandla okwenza lo msebenzi - izindleko ezihlobene nesikhathi zingancishiswa ziqhubekele phambili. Kusukela manje, bambalwa kakhulu abasebenzisi be-DAM abasebenzisa lobu buchwepheshe.
Ngokusho the Ucwaningo lwemboni yeFotoWare kusuka ngo-2020:
Bangu-6% kuphela abasebenzisi be-DAM asebevele batshale imali ku-AI. Kodwa-ke, i-100% ihlela ukuyisebenzisa ngokuzayo, okuzoholela ekutheni bakhuphule inani le-DAM yabo.
Ama-75% awanaso isikhathi esibekiwe sokuthi lokhu kuzokwenzeka nini, okuphakamisa ukuthi kungenzeka ukuthi balinde ubuchwepheshe ukuthi buqhubeke ngcono, noma bangahle bangawazi amathuba akhona okwamanje emakethe.
Ukuhlanganiswa komthengisi ovela eceleni nomhlinzeki we-AI, Izithombe, isivele itholakala ku-FotoWare, futhi sikholwa ukuthi ukuhlanganiswa kwalolu hlobo kuzokwanda kuphela ekuthandeni. Ikakhulukazi njengoba ama-AI ethuthuka njalo futhi azoqhubeka akwazi ukubona izifundo eziningi njengoba isikhathi sihamba, futhi ukwenza lokhu ngokuningiliziwe.
Kusukela manje, bangabona futhi bamake izithombe ezinemibala efanele, kepha abathuthukisi basasebenza ukubenza babone ubuciko, okuzoba yisici esihle seminyuziyamu nemipheme. Bangakwazi nokububona ubuso kahle kulesi sigaba, kepha okunye ukuthuthuka kusasebenza, ngokwesibonelo lapho kusetshenziswa amafemasks, futhi kubonakala izingxenye zobuso kuphela.
Ithrendi yesi-5: I-Blockchain Technology ne-Digital Asset Management
Umkhuba wethu wesihlanu we-2021 ubuchwepheshe be-blockchain. Lokhu akwenzeki nje ngenxa yokwanda kwama-bitcoins, lapho kudingeka khona ukulandelela intuthuko nokuthengiselana, kepha ngoba sikholwa wukuthi ubuchwepheshe bungagqama kakhulu kwezinye izindawo kungekudala, iDAM ingomunye wabo.
Ngokusebenzisa i-blockchain kuzingxenyekazi ze-DAM, abasebenzisi bangathola ukulawula okukhulu kakhulu kwempahla yabo, balandelele lonke ushintsho olwenziwe kufayela. Ngezinga elikhudlwana, lokhu - ngesikhathi - kungavumela abantu ukuthi, ngokwesibonelo, bathole ukuthi isithombe siphazanyisiwe yini noma imininingwane yaso efakiwe ishintshiwe.
Ukuphathwa Kwezimpahla Zedijithali kuyaqhubeka ngokuqhubekayo, futhi ku-FotoWare senza konke okusemandleni ethu ukuhambisana nezitayela. Uma ungathanda ukufunda kabanzi ngathi nokuthi yini esingakunikeza yona, ungabhuka umhlangano wokuzibophezela nomunye wochwepheshe bethu:
Bhuka umhlangano nabachwepheshe be-Fotoware DAM
Tags: ifu lokudala le-adobeaiukuhlakanipha okungekhona okwangempelablockchainUbuchwepheshe be-blockchainamafomu okuvumaIdamuukuhlanganiswa kwedamuisoftware yedamuizitayela zamadamudeloitteukuphathwa kwempahla edijithaliukuhlanganiswa kwempahla yedijithaliisoftware yokuphathwa kwempahla edijithaliizitayela zokuphathwa kwempahla edijithaliizithombegdprI-imaggaMcKinseyI-Microsoft Officepinukuphathwa kwamalungeloubuchwepheshe izitayelaizitayela
U-Amalie Widerberg usebenza njenge-Digital Marketer kwa-FotoWare, umthengisi ohola phambili emhlabeni we-Digital Asset Management (DAM). Uneziqu zeMasters ze-ESST (Society, Science and Technology in Europe), futhi ubikezela ukuthi i-2021 inezinto eziningi ezibekelwe indawo ye-DAM.
Umhlahlandlela Wokugcina Ekwakheni Iphrofayili Ephelele Ye-LinkedIn
Imagga: I-API Yokuhlanganiswa Kokubonwa Kwezithombe Inikwe Amandla Yi-Artificial Intelligence